Iinjineli zaseRussia zibanjiwe ngokusebenzisa ikhompyuter enkulu kwimigodi yeBitcoin | Iindaba zeGajethi
Iqela leenjineli ezazisebenza kwiZiko leNyukliya leFederal e-Russia, indawo eyimfihlo ephezulu yenyukliya, babanjiwe emva kokuzama ukusebenzisa eyona khompyutha inamandla kweli lizwe eyam i-Bitcoin. Umkhuhlane we-cryptocurrency ubonakala ngathi awunasiphelo. Nangona kwezinye iimeko iya kugqithiso olungalindelekanga.
Ekugqibeleni, eli qela leenjineli ligcinwe ngamapolisa. Ilabhoratri ibekwe kwisixeko saseRussia iSarov. Kwezi zibonelelo kukho ikhompyuter ephezulu abazama ukuyisebenzisa kwimigodi yeBitcoin. Nangona akuhambanga kakuhle.
Ngokweengxelo ezininzi, Ityala lolwaphulo-mthetho sele liqalisiwe nxamnye nabasebenzi. Kuba ezi nzame zabasebenzi zokumba umgodi weBitcoin zazingagunyaziswanga. Kuba abasebenzi abavumelekanga ukusebenzisa ezi zibonelelo ngeenjongo zabucala. Ngenxa yeso sizathu ke bavalelwe.
Iinjineli ziyazi ukuba kufuneka amandla amaninzi kwimigodi yeBitcoin. Kungenxa yoko le nto bebheja ekusebenziseni le khompyuter ngamandla amakhulu, eyona inamandla eRashiya. Ngapha koko, babecinga ukuba akukho mntu uza kuqaphela ukuba ikhompyuter isetyenziselwa le njongo.
Umzuzu ikhompyutha iqhagamshele kwi-Intanethi, isebe lezokhuseleko leziko laziswa. Ukusuka kwizicwangciso zabasebenzi ezazisaziwa kwasekuqaleni. Kuba le khomputha ayinakuqhagamshela kwi-Intanethi. Emva kokwaziswa, baqhubeka nokubamba aba basebenzi.
Okwangoku kukho inkqubo ngokuchasene naba injineli ababefuna ukuba zizityebi ngeBitcoin. Nangona okwangoku kungakhange kuthethwe nto ngemeko yakhe okanye malunga nomhla wokuxoxwa kwetyala. Ekuphela kwento eyaziwayo ngaphandle kokubanjwa kwabo kukuba bagxothiwe emsebenzini. Ibali ubuncinci lelo livela eRashiya. Umkhuhlane we-cryptocurrency uyaqhubeka nokuvelisa iindaba ezimangazayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Te knoloji » Imali engezantsi yedijithali » I-Russia ibambe iinjineli ezininzi ngokusebenzisa i-supercomputer kwimigodi ye-bitcoin
I-Olympus Pen E-PL9: Uyilo lwe-retro kunye nokurekhodwa kwe-4K
Sivavanye i-Aukey LT-SL1 inzwa eshukumayo yokukhanya kwangaphandle kwe-LED